Madaxweynaha Jubbaland oo gaaray Magaalada Muqdisho - Awdinle Online
Madaxweyne Axmed Madoobe iyo wafdigiisa oo ay kamid yihiin Xildhibaano iyo Wasiiro ka tirsan Maamulkiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kusoo dhaweeyay Xildhibaano, Wasiiro, siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan.
Ujeedka Madaxweynaha Jubbaland ee Muqdisho ayaa waxaa uu yahay ka qeyb galka Shirka u dhexeeya Madaxda dowladda Federaalka, dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir oo ka dhacaya Teendhada Afisyooni ee xeyndaanka Garoonka.
Madaxweyne Axmed Madoobe iyo wafdigiisa ayaa degi doona xeyndaabka Garoonka oo loo diyaariyay, waxaana duhurnimadii Maanta Caasimadda soo gaaray Ciidanka Ilaalada gaarka ah ee Madaxweynaha.
Shirka uu ku baaqay Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa saddex jeer baaqday, waxaana maamulada Jubbaland iyo Puntland ay shuruudo adeg ku xireen ka qeyb galka shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka ka dhacaya.
Previous articleWeerar Madaafiic ah oo lagu weeraray Xerada Xalane ee Muqdisho
Next articleTurkiga oo lagu qabtay Shaqsiyaad ka tirsan Kooxda Daacish